ICJ စွဲဆိုမှုအရေး BBC ၏ မေးမြန်းချက် ဗီဒီယိုဖြတ်ပိုင်း | ဦးကျော်ဇောဦး – Kyaw Zaw Oo's Blog
December 13, 2019 January 14, 2020 web_master
ICJ စွဲဆိုမှုအရေး BBC ၏ မေးမြန်းချက် ဗီဒီယိုဖြတ်ပိုင်း | ဦးကျော်ဇောဦး
ICJ စြဲဆိုမႈအေရး BBC ၏ ေမးျမန္းခ်က္ ဗီဒီယိုျဖတ္ပိုင္း
အခုလို တရားစြဲလိုက္တဲ့အတြက္ ဘာပဲေျပာေျပာ ဒီျမန္မာႏိုင္ငံထဲမွာ အာဏာကို အလြဲသံုးစားလုပ္ၿပီးေတာ့ တိုင္းင္းသားေတြအေပၚမွာ ဖိႏွိပ္ ႏွိပ္စက္တာ ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္တာေတြ ရွိခဲ့တယ္ဆိုရင္ . . . အဲဒါကို လံုေလာက္တဲ့ အေရးယူမႈ လုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖိအားေတြ သက္ေရာက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကိစၥေတြက်ေတာ့ ကိုယ့္တိုင္းျပည္အတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေရးမယူႏိုင္တာရွိတယ္။ အဲလိုမ်ိဳးျပင္ပက အေရးယူမယ္ဆိုတာနဲ႔ကို အဲလိုမ်ိဳးလုပ္တတ္ကိုင္တတ္တဲ့လူေတြ ႏွိပ္စက္တတ္တဲ့လူေတြ ႏွိပ္စက္တတ္တဲ့အင္အားစုေတြက နည္းနည္း ေနာက္ဆုတ္သြားတဲ့ သေဘာရွိတာေပါ့ေနာ္။ အရင္က လုပ္သေလာက္ မလုပ္ေတာ့ဘူး အရင္က ႏွိပ္စက္သေလာက္ မႏွိပ္စက္ေတာ့ဘူး ဆိုတဲ့သေဘာ ရွိတာေပါ့။
ကၽြန္ေတာ္တို႔ တကယ္လို႔မ်ား မျဖစ္မေနလက္ခံရေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အပိုင္းေတြရွိလာမယ္၊ ၿပီးရင္ တခ်ိဳ႕ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ႏိုင္မျဖစ္ႏိုင္ကို စိစစ္ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္ႏိုင္တဲ့သူေတြကို လက္ခံရေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ အပုိင္းရွိလာရင္ . . . ဒီလိုမ်ိဳး ႏိုင္ငံသားေပးတဲ့လူေတြကို ေပးႏိုင္တဲ့လူေတြကို ၈၂-ဥပေဒအရ ေပါ့ေနာ္ . . . မျဖစ္မေန စစ္ၾကည့္လို႔ ေပးႏိုင္မယ့္လူေတြမို႔လို႔ ေပးတယ္ ဆိုရင္ . . . ဒီရခိုင္ျပည္နယ္မွာ သီးျခား ပိတ္ေလွာင္ထားတာမ်ိဳး မလုပ္သင့္ဘူး။ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးမွာ ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္ပီပီ ဘယ္ေနရာမွာမဆို အေျခစိုက္ခြင့္ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ မူအတိုင္း သူတို႔ကို ျမန္မာျပည္ေရာ ဘာေရာ အကုန္သြားခြင့္ေပးသင့္ပါတယ္။ အဲလိုမ်ိဳးနဲ႔ သြားသင့္ပါတယ္။
ဗီဒီယိုျဖတ္ပိုင္း ၾကာခ်ိန္ => (၁) မိနစ္ (၃၆) စကၠန္႔
မူရင္း လင့္ => https://www.facebook.com/BBCnewsBurmese/videos/2896023770417235/
ထုတ္လႊင့္ရက္စြဲ => 12-12-2019
Watch on Youtube => https://youtu.be/IxFlXogqylQ
On Kyaw Zaw Oo’s Blog => https://kzo.home.blog/2019/12/13/interview-video-cut-bbc-icj-kyazaw-oo/
ICJ စွဲဆိုမှုအရေး BBC ၏ မေးမြန်းချက် ဗီဒီယိုဖြတ်ပိုင်း
အခုလို တရားစွဲလိုက်တဲ့အတွက် ဘာပဲပြောပြော ဒီမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာ အာဏာကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးတော့ တိုင်းင်းသားတွေအပေါ်မှာ ဖိနှိပ် နှိပ်စက်တာ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေ ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် . . . အဲဒါကို လုံလောက်တဲ့ အရေးယူမှု လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ဖိအားတွေ သက်ရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ကိစ္စတွေကျတော့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်အတွင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ အရေးမယူနိုင်တာရှိတယ်။ အဲလိုမျိုးပြင်ပက အရေးယူမယ်ဆိုတာနဲ့ကို အဲလိုမျိုးလုပ်တတ်ကိုင်တတ်တဲ့လူတွေ နှိပ်စက်တတ်တဲ့လူတွေ နှိပ်စက်တတ်တဲ့အင်အားစုတွေက နည်းနည်း နောက်ဆုတ်သွားတဲ့ သဘောရှိတာပေါ့နော်။ အရင်က လုပ်သလောက် မလုပ်တော့ဘူး အရင်က နှိပ်စက်သလောက် မနှိပ်စက်တော့ဘူး ဆိုတဲ့သဘော ရှိတာပေါ့။
ကျွန်တော်တို့ တကယ်လို့များ မဖြစ်မနေလက်ခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အပိုင်းတွေရှိလာမယ်၊ ပြီးရင် တချို့ နိုင်ငံသားဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကို စိစစ်ပြီးတော့ နိုင်ငံသား ဖြစ်နိုင်တဲ့သူတွေကို လက်ခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အပိုင်းရှိလာရင် . . . ဒီလိုမျိုး နိုင်ငံသားပေးတဲ့လူတွေကို ပေးနိုင်တဲ့လူတွေကို ၈၂-ဥပဒေအရ ပေါ့နော် . . . မဖြစ်မနေ စစ်ကြည့်လို့ ပေးနိုင်မယ့်လူတွေမို့လို့ ပေးတယ် ဆိုရင် . . . ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာ သီးခြား ပိတ်လှောင်ထားတာမျိုး မလုပ်သင့်ဘူး။ မြန်မာတစ်ပြည်လုံးမှာ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ပီပီ ဘယ်နေရာမှာမဆို အခြေစိုက်ခွင့် ရှိတယ်ဆိုတဲ့ မူအတိုင်း သူတို့ကို မြန်မာပြည်ရော ဘာရော အကုန်သွားခွင့်ပေးသင့်ပါတယ်။ အဲလိုမျိုးနဲ့ သွားသင့်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုဖြတ်ပိုင်း ကြာချိန် => (၁) မိနစ် (၃၆) စက္ကန့်
မူရင်း လင့် => https://www.facebook.com/BBCnewsBurmese/videos/2896023770417235/
ထုတ်လွှင့်ရက်စွဲ => 12-12-2019
Previous နာမည်တစ်ခုနောက်ကွယ်​က ကြီးမားသော မဟာဗျူဟာ
Next `ရခိုင်ပြည်နယ်´ဟူသော အိုင်ဒီယာ